Fandinihana ny haben'ny ampahany amin'ny Excel
Ity politika cookies ity dia nohavaozina farany tamin'ny 28/06/2021 ary mihatra amin'ny olom-pirenena sy ny mponina maharitra ara-dalàna ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana.
Ny tranokalanay, https://comme-un-pro.fr (eto izao: "ny tranonkala") dia mampiasa cookies sy teknolojia hafa mifandraika (ho an'ny fahatsorana, ireo teknolojia rehetra ireo dia notendren'ny teny hoe "cookies"). Ny cookies dia napetraky ny antoko fahatelo izay nifanarahanay. Ao amin'ny antontan-taratasy etsy ambany, ampahafantarinay anao ny fampiasana cookies amin'ny tranokalanay.
2. Inona ny cookies?
Ny cookie dia rakitra kely sy tsotra nalefa niaraka tamin'ny pejin'ity tranonkala ity ary notehirizan'ny mpitety tranonkala anao amin'ny kapila mangirana ao amin'ny solosainao na fitaovana hafa. Ny fampahalalana voatahiry ao dia mety halefa any amin'ny mpizara anay na amin'ny mpizara an'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny fitsidihana manaraka.
3. Inona no atao hoe script?
Ny script dia sombin-kaody izay ampiasaina hampandeha tsara sy hifaneraserana ny tranokalanay. Ity kaody ity dia tanterahina amin'ny mpizara anay na amin'ny fitaovanao.
4. Inona ilay fanilo tsy hita maso?
Ny fanilo tsy hita maso (na fanilo Internet) dia sombin-tsoratra na sary kely tsy hita maso ao amin'ny tranonkala iray, ampiasaina hanarahana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Mba hanaovana izany, tahiry maro samihafa momba anao no tehirizina amin'ny fampiasana tag tsy hita.
5.1 Cookie ara-teknika na mandeha
Ny cookies sasany dia miantoka ny fiasan'ny ampahany amin'ny tranokala tsara ary ny safidinao amin'ny maha-mpampiasa anao no jerena. Amin'ny fametrahana cookies azo ampiasaina, dia manamora kokoa ny fitsidihanay ny tranokalanay. Noho izany dia tsy mila mampiditra fampahalalana mitovy foana ianao rehefa mitsidika ny tranokalanay ary, ohatra, mijanona ao anaty sarety fiantsenana mandra-pandoanao ny vola. Azonay atao ny mametraka ireto cookies ireto raha tsy mahazo alalana aminao.
5.2 Cookies statistika
Koa satria ny statistika dia arahana amin'ny fomba tsy fantatra anarana, tsy misy fangatahana alalana hametraka cookies statistika.
5.3 Cookies amin'ny dokam-barotra
Amin'ity tranonkala ity dia mampiasa cookies amin'ny dokam-barotra izahay, ahafahanay manana topimaso amin'ny valin'ny fampielezan-kevitra. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny mombamomba izay noforoninay mifototra amin'ny fitondrantenanao https://comme-un-pro.fr. Miaraka amin'ireto cookies ireto, ianao, amin'ny maha-mpitsidika tranokala anao, dia mifamatotra amin'ny ID tsy manam-paharoa, saingy ireo cookies ireo dia tsy hanondro ny fitondrantenanao sy ny zavatra mahaliana anao amin'ny serivisy fanaovana dokam-barotra manokana.
5.4 Mivarotra / mizaha cookies
Ny cookies marketing / tracking dia cookies na endrika fitehirizana eo an-toerana hafa, ampiasaina hamoronana mombamomba ny mpampiasa mba hampisehoana dokam-barotra na hanarahana ny mpampiasa ato amin'ity tranonkala ity na amin'ny tranokala marobe na inona na inona tanjona. Marketing mitovy amin'izany.
Satria ireto cookies ireto dia voamarika ho cookie manara-dia, mangataka alalana aminao izahay hametraka azy ireo.
6. Cookies napetraka
Antontan'isa (tsy mitonona anarana)
Mampiasa Matomo ho an'ny statistikan'ny tranonkala izahay. Read more
Ity data ity dia tsy zaraina amin'ny antoko fahatelo.
Tehirizo ny karapanondro ho an'ny mpampiasa
Tehirizo ny karatra ID tsy manam-paharoa
ID referrer fivarotana
Mampiasa ny Complianz izahay amin'ny fitantanana ny faneken'ny cookie. Read more
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Fanambarana momba ny tsiambaratelo Complianz.
Fantaro hoe iza amin'ireo boaty cookie no haseho
Tehirizo ny fankatoavana cookie cookie
Tehirizo raha tsy miraharaha hafatra iray
Tehirizo ny ID momba ny politikan'ny cookies efa nekena
Divi (Lohahevitra kanto)
Fikasana miandry ny famotorana, Functional
Mampiasa Divi (The Elegant Themes) izahay amin'ny famolavolana ny tranokala. Read more
Tanjona miandry ny famotorana
Mampiasa ET Editor izahay amin'ny famolavolana ny tranokala. Read more
Mampiasa Rohy Pretty ho an'ny fitantanana atiny izahay. Read more
Mampiasa Yandex Metrica izahay ho an'ny antontan'isa amin'ny tranokala. Read more
Statistics, Tanjona miandry ny fanadihadiana
Mampiasa Wistia izahay mba hampisehoana horonan-tsary. Read more
Raha mila fanazavana fanampiny, vakio azafady ny Fanambarana momba ny fiainana manokana Wistia.
Tehirizo raha nahita votoaty tafiditra ao ny mpampiasa
Ny fizarana data dia eo am-panadihadiana
Rehefa mitsidika ny tranonkalantsika voalohany ianao dia hampiseho anao ny varavarankely pop-up miaraka amin'ny fanazavana momba ny cookies. Raha vantany vao tsindrio ny "Save preferences" dia manome alalana anay hampiasa ny sokajin'ny cookies sy ny extensions izay nofidinao tao amin'ny varavarankely pop-up, araka ny voalaza ao amin'ity politika cookie ity. Azonao atao ny manafoana ny fampiasana cookies amin'ny alàlan'ny browser, fa azafady azafady fa mety tsy mandeha tsara intsony ny tranokalanay.
7.1 Tantano ny fametrahana ny fanekenao
8. Ny zonao momba ny angona anao manokana
Ianao dia manana ireto zo manaraka ireto momba ny angonao manokana:
Raha te hampiasa ireo zony ireo dia mifandraisa aminay. Azafady mba jereo ny antsipiriany momba ny fifandraisana eo ambanin'ny politikan'ity cookies ity. Raha manana fitarainana momba ny fomba fikirakiranao ny angon-drakitrao izahay dia te hampahafantarina anao, saingy manan-jo ihany koa ianao hametraka fitoriana amin'ny manam-pahefana mpanara-maso (fahefana fiarovana data, toy ny EDPS).
9. Mavitrika / manafoana ary mamafa ny cookies
Azonao atao ny mampiasa ny Internet browser hamafana cookies na mandeha ho azy na amin'ny tanana. Azonao atao ihany koa ny mamaritra fa misy cookies tsy azo apetraka. Safidy iray hafa ny fanovana ny fikirakirana Internet anao mba hahazoanao hafatra isaky ny apetraka ny cookie. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo safidy ireo dia jereo ny torolàlana ao amin'ny faritra fanampiana ao amin'ny tranonkalanao.
Azafady azafady fa mety tsy mandeha tsara ny tranonkalantsika raha tsy mandeha ny cookies rehetra. Raha hamafa ny cookies ao amin'ny tranokalanao ianao, dia hapetraka aorian'ny fanekenao rehefa hiverina amin'ny tranokalanay ianao.
10. Antsipirian'ny fifandraisana
Raha mila fanontaniana sy / na hevitra momba ny politikan'ny cookie sy ity fanambarana ity dia mifandraisa aminay amin'ireto fampiasana ireto antsipirian'ny fifandraisana manaraka ireto:
Ity politika cookies ity dia natambatra niaraka cookiedatabase.org ny 17 / 01 / 2022
fifandraisana an-tsoratra sy am-bava - fiofanana maimaimpoana (14) marina (161) Fiofanana maimaimpoana ho an'ny fampandrosoana manokana sy matihanina (49) Fiofanana maimaimpoana momba ny fandraharahana (81) Fiofanana maimaimpoana Excel (31) Fiofanana matihanina (104) fiofanana maimaim-poana amin'ny fitantanana tetikasa (15) fiofanana maimaim-poana amin'ny fiteny vahiny (9) Fomba sy torohevitra amin'ny fiteny vahiny (22) Fiofanana maimaim-poana amin'ny lozisialy sy ny fampiharana (20) Modely taratasy (19) mooc (171) fiofanana maimaimpoana amin'ny fitaovana google (14) Fiofanana maimaim-poana PowerPoint (13) Fiofanana momba ny mari-barotra amin'ny Internet maimaimpoana (72) Fiofanana tsy misy teny (13)